१ कोरिन्थी १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ कोरिन्थी १:१-३१
१ परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टको प्रेषित* बन्न बोलाइएको पावलबाट र हाम्रो भाइ सोस्थेनेसबाट २ कोरिन्थमा भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई पत्र, तिमीहरूलाई जो ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू भएको नाताले पवित्र पारिएका छौ अनि पवित्र जनहरू बन्न बोलाइएका छौ। साथै, तिनीहरूलाई पनि जो जहाँसुकै भए तापनि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम लिइरहेका छन्‌, जो तिनीहरूका र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ: ३ परमेश्वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। ४ ख्रीष्ट येशूमार्फत परमेश्वरले तिमीहरूलाई देखाउनुभएको असीम अनुग्रहको लागि परमेश्वरलाई म सधैं धन्यवाद चढाउँछु। ५ उहाँमा तिमीहरू हरेक कुरामा धनी भएका छौ, बोल्ने क्षमतामा र पूर्ण ज्ञानमा, ६ किनकि ख्रीष्टसित सम्बन्धित साक्षीले तिमीहरूमाझ दह्रोगरि जरा गाडेको छ। ७ त्यसैले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने समय उत्सुकतासाथ पर्खंदै गर्दा तिमीहरूमा कुनै वरदानको अभाव कदापि नहोस्। ८ उहाँले तिमीहरूलाई अन्तसम्मै स्थिर पनि बनाउनुहुनेछ, ताकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूमाथि कुनै दोष नलागोस्। ९ परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई उहाँको छोरा, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको साझेदार हुन बोलाउनुभयो। १० भाइहरू हो, अब म तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आग्रह गर्छु कि तिमीहरू सबैले एउटै कुरा बोल र तिमीहरूबीच फूट नहोस् तर तिमीहरूको सोचाइ र विचार एउटै होस्। ११ किनकि ए मेरा भाइहरू हो, तिमीहरूमाझ फूट छ भनेर क्लोएको घरानाबाट मलाई खबर मिलेको छ। १२ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, तिमीहरू कसैले “म पावलको चेला हुँ,” कसैले “म अपोल्लसको चेला हुँ,” कसैले “म केफासको चेला हुँ” अनि कसैले चाहिं “म ख्रीष्टको चेला हुँ” भन्छौ रे। १३ ख्रीष्ट तिमीहरूबीच विभाजित हुनुभएको छ। के पावल तिमीहरूका लागि टाँगिएको थियो र? वा के तिमीहरूले पावलको नाममा बप्तिस्मा* गरेका थियौ र? १४ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले क्रिस्पस र गायसबाहेक तिमीहरू कसैको बप्तिस्मा गरिनँ, १५ ताकि मेरो नाममा बप्तिस्मा गरें भनेर तिमीहरूमध्ये कसैले भन्न नसकोस्। १६ हो, मैले स्तिफनासको घरकाहरूको पनि बप्तिस्मा गराएँ। त्यसबाहेक अरू कसैको मैले बप्तिस्मा गरें कि गरिनँ, मलाई थाह छैन। १७ किनकि ख्रीष्टले मलाई बप्तिस्मा गराउन होइन तर सुसमाचार घोषणा गर्न पठाउनुभयो। अनि मैले यो काम विद्वान्‌हरूको भाषामा गर्नु हुँदैन, नत्र त ख्रीष्टको यातनाको खम्बा* बेकामको हुनेछ। १८ नष्ट हुनेहरूका लागि यातनाको खम्बासित सम्बन्धित सन्देश मूर्खता हो तर उद्धार पाउने हामीहरूका लागि भने यो परमेश्वरको शक्ति हो। १९ किनकि यस्तो लेखिएको छ: “बुद्धिमान्‌ मानिसहरूको बुद्धि म नष्ट पार्नेछु अनि विद्वान्‌हरूको ज्ञानलाई म तिरस्कार गर्नेछु।” २० यस युगका बुद्धिमान्‌ मानिसहरू कहाँ छन्‌? शास्त्रीहरू कहाँ छन्‌? विवाद गर्ने मानिसहरू कहाँ छन्‌? के परमेश्वरले संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनुभएन र? २१ परमेश्वरको बुद्धि यसैमा देखिन्छ कि संसारले आफ्नो बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई नचिनेकोले संसारले मूर्ख ठानेका कुराहरूको प्रचारद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्नु उहाँलाई उचित लाग्यो। २२ यहूदीहरू चमत्कार खोज्छन्‌ र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजी गर्छन्‌, २३ तर हामी भने खम्बामा टाँगिनुभएका ख्रीष्टको प्रचार गर्छौं, जो यहूदीहरूका लागि ठक्करको कारण र अन्यजातिहरूका लागि मूर्खता हो। २४ तर जो-जो बोलाइएका छन्‌, चाहे यहूदी होऊन्‌ वा ग्रीक, तिनीहरूका लागि ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। २५ किनकि परमेश्वरको मूर्खता ठानिएका कुराहरू मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ र परमेश्वरको कमजोरी ठानिएका कुराहरू मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। २६ भाइहरू हो, तिमीहरू आफ्नै बोलावटलाई विचार गर, मानिसहरूको नजरमा तिमीहरूमध्ये धेरै जना बुद्धिमान्‌, धेरै जना शक्तिशाली र धेरै जना खानदानी थिएनौ, २७ तर बुद्धिमान्‌ मानिसहरूलाई सरममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई रोज्नुभयो अनि बलिया कुराहरूलाई सरममा पार्न परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई रोज्नुभयो। २८ अनि अस्तित्वमा भएका कुराहरूलाई नभएझैं तुल्याउनलाई परमेश्वरले संसारका महत्त्वहीन कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई रोज्नुभयो, २९ ताकि कसैले पनि परमेश्वरसामु घमन्ड गर्न नसकोस्। ३० तर उहाँले गर्दा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूसित एक भएका छौ। उहाँले परमेश्वरको बुद्धि र परमेश्वरको न्यायोचित स्तर प्रकट गर्नुहुन्छ। येशूद्वारा नै मानिसहरू पवित्र ठहरिन सक्छन्‌ अनि उहाँले तिर्नुभएको फिरौतीद्वारा तिनीहरू मुक्त हुन सक्छन्‌, ३१ ताकि जस्तो लेखिएको छ: “जसले घमन्ड गर्छ, त्यसले यहोवामा घमन्ड गरोस्।”
^ १को १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
^ १को १:१३ * मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ १को १:१७ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
१ कोरिन्थी १